ထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက်များ, တိုးမြှင့်ကြသည်မဟုတ်, အတု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက် Artificial, မလုပ်ခဲ့ပြီးနေ
ထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက် Artificial, မလုပ်ခဲ့ပြီးနေ
"ဒါဝိဒ်က, ငါမကြာခဏစင်စစ်, လူသားတွေတည်ရှိမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတံခါးသော့ကိုဖွစျရမညျ ... လူသားတွေ၏ငြူစူခြင်းတစ်မျိုးခံစားရတယ်။ " - အထူးကု (mecha ပြောင်းလဲ), "AI အ Artificial Intelligence, " Warner Bros. , 2001
အခြားနေ့ကငါတစ်ခုခုရရန်မိသားစုကအခန်းသို့ ဝင်. ဒါငါမေးသော်ဘာမေ့, "Alexa, ငါဒီမှာဘာလာတာလဲ"
ဒါကြောင့်ကျွန်မအမြဲပစ္စုပ္ပန်ဖုန်းကိုထုတ်ကြာပွတ်ဆိုသည်ကား, "Siri ကိုငါဘာလိုချင်ခဲ့တာလဲ"
ဝမ်းနည်းပါတယ်, Alexa, တောင်းပန်ပါတယ်, Siri ကို။
ငါအပြည့်အဝသူတို့ရဲ့ဘာပဲသို့အတုထောက်လှမ်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောကြေညာချက်ကိုဖတ်ရှု / နားမထောင်လျှင်, ငါရဂုဏ်နင့် တကယ်နေမကောင်း!
အားလုံးပြီးနောက်, အတု - ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝတစ်ခုခုတစ်ဦးမိတ္တူအဖြစ်ဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်လူသားတွေနေဖြင့်ထက်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်။
Dude / dudette ကတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပါတယ်တိုင်အောင်, တကယ့်ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ပါဘူး ... ပြီးတော့မတူညီတဲ့တစ်ခုခုလုပ် ... ပြီးရင်အသီးအသီးအရေးယူမှုကနေတစ်ခုခုကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုပြုအတွေ့အကြုံကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်လုပ်ခဲ့ပြီးရပါမည် - ပိုကြီးတဲ့စေခြင်းငှါ၎င်း, အရွယ်အစား, အရေအတွက်, အစှမျးသတ်တိ, ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းအတာအတွက်ကိုကျယ်; တိုးမြှင့်လာသည်။
ဟေ့, Musk သူ AI အကမ္ဘာပေါ်မှာလွှတ်ခံရခြင်းအကြောင်းကိုတကယ်စိုးရိမ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။
မကြာသေးမီကသူသည်ကြိုးမဲ့ကွန်ပျူတာသင့်ဦးနှောက်ပလပ်ထိုးပေးရသည့် Neuralink နှင့်အတူနှလုံး၏အပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါတယ်။
Jeezz, ဧ, မဆိုတစ်ဝက်အစီအမံကိုကြိုက်ပါဘူး!
သူတို့ AI အအရာကိုသိကျွမ်းဆုံးနဲ့သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကနေအထိအဖြစ်ဖော်ပြပါမည်ဆိုပါကလူတွေကိုမေးကြည့်ပါ Terminator ။
Hubspot မကြာသေးမီကသူတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းရှေးရှေးသာ 37 ရာခိုင်နှုန်းကတစ်ဦး AI အ tool ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးပေမယ့်သူတို့ထဲက 63 ရာခိုင်နှုန်းကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
သငျသညျစသညျတိုးမြှင့်မှုများကားမောင်း, ရုပ်ရှင် / ဓာတ်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအသံရှာဖွေမှုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးကိုသိရ
ဒါဟာကြိုးစားပါ - ဒီနေ့ရဲ့ AI အဖြေရှင်းနည်းများအများစု၏ဂုဏ်အသရေကိုသူတို့ကသူတို့ကိုလုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ် sorta '' ဘယ်လို, သူတို့က ... သူတို့ပဲသူတို့ကလုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာလုပ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကြဘူးကြောင်း, သူတို့မကျင့်သည့်အခါ မှလွဲ. ... သူတို့ကိုလုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခါအချိန်, နှင့်အများဆုံး။
အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရဲ့ဘယျသို့ပွုရပါလိမ့်မယ်; အမှုအရာကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပျက်စေရန်လူ့အပြန်အလှန်ရှိတယ်မဟုတ်လျှင်နှင့်အကြောင်း, အဲဒီအကြောင်းပါပဲ။
DeepMind, Go ကိုသူတို့မကျင့်သည့်အခါ မှလွဲ. ... အလုပ်လုပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတစ် 2500 နှစ်အရွယ်အာရှဂိမ်း၏ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမားရိုက်နှက်ကြောင်း software ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဆိုမှုအလောင်းတော်ထားသော AI အသုတေသနကုမ္ပဏီယူပါ။
အဆင်သင့်, Go - ကလူလည်းကျိုးခံရဖို့ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူရိုးရှင်းပေမယ့်ရှုပ်ထွေးပြီးဂိမ်းသင်ယူဖြည့်ရန်နာရီသောအခါသိသာထင်ရှားတဲ့ Go ကို၏ရှေးဟောင်းတရုတ်ဂိမ်း TV နဲ့စမတ်ဖုန်းမတိုင်မီလမ်းတီထွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအတွေ့အကြုံ၏သားစဉ်မြေးဆက်ကိုကျော်တီထွင်ခဲ့သမားရိုးကျပညာနှင့်မဟာဗျူဟာများ "ကိုချိုးဖောက်" အားဖြင့် Champs ရိုက်တယ်။
လူသားတွေဟာဂိမ်းတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားနှင့်စမ်းသပ်သူတို့ ***** တက် ed ကိုပြလိုသောမဟုတ်အန္တာရာယ်လိုသောမဟုတ်, အမှားလုပ်လိုသောမဟုတ်၏ဤ fallibility ရှိသည်။
သို့သော် "မြုံ" စဉ်းစားခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်အတူလူတစ်ဦး၏ဉာဏ်ရည် (အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏) တိုးပွားတစ်ခုခုအနိုင်ရသို့မဟုတ်ပွီးမွောကျသစ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလမ်းရှိပါတယ်။
သူတို့သူမကကြောင့်လမ်းလုပ်ဖို့တတ်နိုင်မဖြစ်သင့်ပေမယ့်သူမအောင်မြင်ခဲ့သိသောကြောင့်ဒါဟာလုံးဝမိဘများနှင့်အဘိုးအဘွားအံ့သြစေတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြီးမြောက်ကလေးတစ်ဦးနှင့်တူတွေအများကြီးပါပဲ။ အဘိုးအဘွားသူတို့ရဲ့ဆိရဲ့ဆိတ်သငယ်တစ်ဦး Brainiac ထင်တယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
နှင့်သူငယ်ကဲ့သို့, AI အ program ကိုမသိ - နှင့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး - ဒါကြောင့်အောင်မြင်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်လျှင်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်မ!
ဒီ AI အ / လူ့အဖွဲ့ရောဂါများကုသပတ်ဝန်းကျင်ချွေတာနဲ့ကျနော်တို့တှငျနထေိုငျကွဝဠာမထိုးဖောက်အတွက်လုပ်နိုင်သောအရာကိုကြံစည်ကြသနည်း
Freakin '' ကြောက်မက်ဘွယ်!
ရုံကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ - AI အများ၏အယူအဆကြောင့်နီးပါးထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပြောနေတာတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး, ထိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုထည့်သွင်းမထားဘူးကြောင်းမိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်လျှင်တူသောပုံဤမျှလောက်များစွာသောကော်ပိုရိတ်လမ်းပြမြေပုံအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအရာအားလုံးနှင့်လူတိုင်းကနေဒေတာတွေကိုစုဆောင်းခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ AI အဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးကနဦးတိုးတက်မှုနှုန်းကဘာလုပ်ရမှန်း, ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်း, လူများကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူးအိုင်တီ (Information Technology) တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘယ်လို / အကူအညီနဲ့နေ့က-to-နေ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှု impact သနည်း?
မကြာသေးမီက Tata Consultancy Services (TSC) စစ်တမ်းအမှုဆောင်အရာရှိ၏ 84 ရာခိုင်နှုန်းက AI အအသုံးပြုမှုကိုကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအရေးပါကြောင်းခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိ 50 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းမည်ဟုဆိုသည်။
ဒါပေမယ့်အမှုဆောင်အရာရှိသာရှစ်ရာခိုင်နှုန်းက AI အသုံးပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အကြောင်းအိုင်တီ၌ရှိ၏ -, လုံခြုံရေးကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖော်ထုတ်မယ်အသုံးပြုသူကိစ္စရပ်များနှင့်အလိုအလျောက်ပေးပို့။
မနက်ဖြန်အဘို့အ Prepping - AI အပေါ်အကောင်အထည်ဖော်မှုကနေဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့နီးပါးတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလမ်းပြမြေပုံသည်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုလာမည့်ယှဉ်ပြိုင်နေဖို့လိုအဖွဲ့အစည်းများကစီစဉ်ထားသို့မဟုတ်စူးစမ်းခံနေရ, အရပျ၌ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ 50B IoT (အရာ၏အင်တာနက်) မှတ်ရှိသည်သွားနေတယ်ဆိုရင်, AI အဘဏ္ဍာရေး, မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ကော်ပိုရိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, HR, စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများရှိလူများကိုကူညီလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိသည်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း, AI အ / လူ့အဖွဲ့ကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လျော့နည်း stressfully သောအရာတို့ကိုပြီးမြောက်နိုင်, ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံး (ဟေ့ပင် 1s နှင့် 0s ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ) အိမ်မှာပျော်ရွှင်စောစောသွားရလာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
ငါ့ကိုကူညီပါကြစို့ - လိုခငျြသို့မဟုတ်မ - - သင်၏ပရောဂျက်များအတွက် Clippy အဖြစ်အဟောင်းတွေက Windows အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လူသိများ Microsoft ရဲ့ရုံးလက်ထောက်, သင်၏ screen ပေါ်မှာခုန်ခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သိုထားသူတစ်ဦးသည်ချိုသောနည်းနည်းကောင်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက XP ကိုမိတ်ဆက်သောအခါ (ပိတ်ထားခဲ့သည်) အနိစ္စရောက်လေ၏။
အဆိုပါ AI အ / လူ့အဖွဲ့လျှော့ပေါ့နေစဉ်နှင့်အခြား AI အဖြေရှင်းချက်သူတို့ပင်သူတို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုခငျြမသိခဲ့ပါကြောင်းစောင့်ကြည့်ချင်အသစ်အဘယ်အရာကိုအကြောင်းအရာ, အဘယျသို့အသစ်ကပြသထုတ်တွက်ဆဖို့ဒေတာအတွက်တစ်ဝှမ်းတူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပို. ပို. Audio / Video အကြောင်းအရာသည် insatiable ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်, အင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးလူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ထားတဲ့ Unreal အလိုဆန္ဒရှိအဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့သူတို့ရဲ့ AI အ tools တွေကိုသုံးပြီးလိမ့်မည်။
ထိုအ Hotstar ဘိုင်ဒူနှင့် Youku သင့်ရဲ့သမျှမျက်နှာပြင်ရန်သင့်အားလျှက်ရှိကြောင်းစောင့်ရှောက်ဖို့လန်းဆန်းသောအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြလိမ့်မည် Comcast, Sky, ရော်ဂျာ, Netflix, အမေဇုံချုပ်ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများ။
အလုပ်မှာအိမ်တွင်အကောင်းဆုံး AI အ / လူ့အဖွဲ့များကြီးထွားခြင်းနှင့်အကြံထမြောက်ရသောအပါလိမ့်မယ်အတူကုမ္ပဏီများမှ။
မဖွင့်ခင်အထိတနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ ... အကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ AI အ / လူ့အဖွဲ့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ - ကလူ AI အများ၏နိဒါန်းနှင့်အတူရှိသည်ပြဿနာများ၏အများစုမှာစူပါအေးနှင့်စူပါစကားမပြောနိုင်သောရုပ်ရှင်များ, အခြားသူတွေသို့မဟုတ်သတင်းမှားဆန့်ကျင်တဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်မှာအကုန်လုံးလူစုထဲကလာပါတယ်။
လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုအကြောင်းကိုအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်; သင်မူကား, Google သို့မဟုတ်အမေဇုံသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအပေါငျးတို့သပေးလျှင်, Facebook, twitter, Instagram ကို, Weibo, WeChat, Africanzone, Blueworld, Partyflock, Baboo နှင့်အခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကို / data share; သငျသညျကိုဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပန်ရှိပါသလဲ
ကျွန်တော် / စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်းလုပ်သားများမုဆိုး / forage, စိုက်ပျိုးရေး, ကောက်-and ပုဆိန်မိုင်းလုပ်သား / lumberjacks နှင့်ခဲတံ pushers ခဲ့ကြသည်အခါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Go ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးကတည်းက 2,500 နှစ်ပေါင်းကတည်းကခြေနှစ်ခုနှင့်အထူးသဖြင့်အပေါ်လမ်းလျှောက်စတင်ကတည်းကလူသားတို့ကပြွီးတစ်မျှမျှတတလျောက်ပတ်သောအလုပ်အမှုကိုပြုတော်မူပြီ ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဂိမ်းရုတ်တရက်ကျော်ရပါမည်နည်း
တစ်ဦးကကြီးမားသောတဦးတည်း ... Programming ဘက်လိုက်မှု,
ဥပမာအားဖြင့်, တေရှိတယ်, သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုခံစားရန် 18 နှစ်အရွယ်မှ 24- ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဗလာတွစ်တာ bot အမျိုးသမီးတွေငရဲ၌သေခြင်းနှင့်မီးမရှို့သင့်တယ်ဟုပြောသည်တစ်ပုပ်-ပါးစပ်လူမျိုးရေးခွဲခြားသို့မဟုတ်မီးလောင်တိုက်သွင်း denier သို့ morphed ။
သို့မဟုတ် Gorilla အဖြစ်အာဖရိက-အမေရိကန်အသုံးပြုသူများကို tagged ကြောင်း Google မှဓာတ်ပုံများ။
သို့မဟုတ် Siri ကိုအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မည်ပုံ သိ. မဟုတ်။
အမျိုးသမီးနှောင့်ယှက်၏, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အစဉ်အမြဲပြဿနာ, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း။
သငျသညျအပေါ် AI အ - တစ်ခါတစ်ရံရှေးရှေးရုံနဲ့အခြားရှေးရှေးတို့နှင့်ကြီးသောသတင်းသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူဆက်စပ်ခံရဖို့မကြိုက်ဘူး; ဒါစီးဆင်းကြော်ငြာဒေါ်လာစောင့်ရှောက်ဖို့ Google ကအနည်းငယ် automated ချိန်ညှိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
AI အ / အစီအစဉ်များကိုသတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်, လူမျိုးရေးခွဲခြားဘက်လိုက်နဲ့လိုမုန်းထားစိတ်ဖြစ်နိုင်သူကလူ (တောင်းပန်ပါတယ် Alexa နှင့် Siri ကို) ကအတူတူတင် 1s နှင့် 0s ထက်ပိုမိုချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။
အခုအချိန်မှာအဲဒီကုဒ်စာရေးဆရာများအများစုလက်တင်အမေရိကန်-အာဖရိကနှင့်မ, အမျိုးသမီးမဟုတျပါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစွဲပေါ်ထွန်းဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
မှန်ပါသည်, ပရိုဂရမ်မာ (s), စိုးရိမ်ထိတ်လန်အတွက်ခုန်နှင့်ကပြင်ပေး ... ယခုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျနော်တို့ဘက်လိုက်သည်သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအချို့အစိတ်အပိုင်းမှအန္တရာယ်မကုဒ်အရေးအသားကုဒ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒါက ... '' Big အချိန်ဂုဏ်နစို့ပဲ!
လူသားမြားသညျနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်း AI အအစီအစဉ်များ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲစမ်းသပ်ထုတ်လှိမ့်နေသောလူများကိုဖြစ်ကောင်း Google ရဲ့အစောပိုင်းဆောင်ပုဒ်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ် ... အဘယ်သူမျှမအပြစ်ပြု.
သူတို့ရိုးရိုးန်းကျင်ကြော်ငြာတွေ juggling အားဖြင့်ပိုက်ဆံ print ထုတ်နိုင်ပါတယ်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့တစ်ချိန်ကအဘယ်အရာ heck, သူတို့ကသုံးပြီးဖွင့်အပ်ပေးတော်မူ၏။
Code ကိုစာရေးဆရာများပြဿနာများကိုသူတို့စီစဉ်ထားသို့မဟုတ်မရည်ရွယ်ခဲ့သည်ပင်လျှင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်း AI အဖက်, စမ်းသပ် retesting, tweaking နှင့်သနျ့အခြားကုဒ်စာရေးဆရာများရှိသည်သွားနေကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ ", အခြားသူများမော်နီကာကပြောပါတယ်ဘယ်အရာကို၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုသည့်အခါအဆက်မပြတ်သတိရဖို့ရှိသည်ငါသည်ဤလကျမခံနိုငျပါသညျ! သင့်ကိုယ်ပိုင်လေးအတွက်မျှအစားထိုးရှိပါသည်! "
ငါ့ကလေးတွေစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ဥစ္စာ ... သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဗွီဒီယို၊ အသံဗွီဒီယိုကို Refresh Mode တွင်ထည့်ခြင်း - ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2019
တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖြည့်တင်းနိုင်သည်၊ - ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2019
Lower Latency သည်ပိုမိုမြင့်မားသော Viewer ကျေနပ်မှုနှင့်ညီမျှသည် - ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2019
CES2017 MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-04-26
နောက်တစ်ခု: "ငါသည်အချိန်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်ပါလျှင်": DoJ နဲ့ In-အိမ်ယူနစ်